Faka ingxelo entsha yeCydia 1.1.8 kwi-iOS 5 | IPhone iindaba
Ngokumka kuka IOS 6 yathintela ukuqhekeka kwentolongo I-Saurik isungule Inguqulelo entsha yeCydia, inguqulelo 1.1.8. Le nguqulo iphucula isantya sokukhangela kwaye ifuna ixesha elincinci lokuphinda ulayishe idatha. Ngokubanzi isebenza ngcono, kodwa uhlaziyo aluveli kwiCydia, ifaka kuphela xa ujonga izixhobo ezitsha zejele nge-iOS 6.
Ukuba unayo iOS 5 kwaye ufuna ukufaka le nguqulo, qhubeka ufunda emva kokutsiba.
Uyakudinga khuphela le fayile.
Kwaye uyifake ngeFayile (ungayifaka nakwikhompyuter yakho ngeSSH, okanye uyithumele kuwe nge-imeyile kwaye uyifake ngeFayile). Apha unayo ividiyo yendlela yokwenza ngayo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Faka ingxelo yokugqibela yeCydia kuyo nayiphi na i-iPhone nokuba ayisiyi-4S
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » Faka ingxelo entsha yeCydia 1.1.8 kwi-iOS 5
Izimvo ezi-35, shiya ezakho
ubuncinci beka indlela yobisi
Ngonaphakade nanamhlanje sitsho
Ukuba indlela oyikhumbulayo iyafana kwaye emva koko uyayifaka ngethamsanqa.
Phendula Ngonaphakade nanamhlanje
indinika ikhowudi yempazamo: 512: S
UJoseph Lopez sitsho
Ngaba ukuqhekeka kwejele kwe-ios6 sele ikhona?
Phendula kuJose Lopez
ewe, kuphela kunomdla kunye neemodeli ezithile ze-4,3GS ..
I-Tb indinika impazamo 412. I-iphone 4 ngo-5.1.1
Xa beyikhuphela nge-ifile esuka kwi-iPhone baya kuya kwi-bar / mobile / uxwebhu kuya kubakho i-cydia 1.1.8 baya kukunika i-installer kwaye ulinde, sele unayo i-cydia 1.1.8
Ngaba iyasebenza kwi-iPad 2 Wifi? (icacile nge-iOS 5.1.1)
Kuyenzeka ukuba uyifake kwi-3G ene-4.2.1
Uxolo. Ndiyabuza, andikuqinisekisi.
Andazi ukuzama ukubona
Ndiyangqina ukuba inako.
Ndikwabona ukuphucuka okuncinci, akukho nto ibalulekileyo kule ndawo.
Molo ngokuhlwa Gonzalo, Kwi-iPad 2 iWifi + 3G, uhlobo olutsha lweCydia lufakiwe, ngaphandle kokufaka iManejala yokuThoba iSafari, okanye enye ekhankanyiweyo kwiVidiyo.
Ndingenile kwiphepha leendaba le-iPhone, ngeSafari ndimnike ukukhuphela ifayile, wandibuza ukuba ndiyafuna ukuvula ngeFayile nditsho ewe, kulandelwe ukuba ndifuna ukuyifaka, ndithi ewe yiyo, ndinayo I-Cydia 1.1.8. 2 kwi-iPad 3 iWifi + 5.1.1G, ene-XNUMX kunye neJailbreak.
Kuyafana… ndinoMphathi wokuKhuphela iSafari nabanye, kodwa ndiyinike ngokulula ukukhuphela eSafari, ivulwe kwiFayile, isifakeli, yiyo ke leyo 🙂
Ndenza lula ukwenza i-jailbreak ngenguqulelo entsha ye-redsn0w ndiyenze ngoluhlobo kuba ndizamile ukubuyisela iphone yam nge-ios 6 kwaye ihlala indinika impazamo ekugqibeleni ndibuyele ku-5.1.1 kwaye ndayiqhekeza kwaye ndine-cydia entsha
I-Ramon 70 sitsho
Ndihlaziye njengoko kubonisiwe nguJon ukuya ku-1.1.8, enkosi, kodwa xa ubhala eCydia, kukhangelo lwakho, ucofa isandi. Kwizandi ndinokucofa ikhibhodi kukhubaziwe. Kwi-4S ngo-5.1.1. Ngaba iyenzeka kubantu abaninzi okanye ifika ngexesha?
Khange ndikwazi ukuyikhuphela njengoko benze eyam i-iPad 2 wifi + 3 G
UKarloz sanchez sitsho
Molo KE, ndinamathandabuzo amaninzi malunga ne-iPhone 4.3.5 (8L1) yam. Kisiera onokuthi undincede ndifakele i-cidya kwisixhobo sam.thandabuza ……… ..
Phendula uKarloz Sanchez
Olibhityileyo lihle sitsho
Phendula u-El flako bello
Inguqulelo entsha ye-cydia itsala ngokukhawuleza kuzo zonke iimeko kwi-iphone4 yam ene-5.0.1
Ndingayifaka njani i-cydia ngqo kwi-iPhone yam
UAlanis Zambrana sitsho
Molo ndifuna i-cydia
Phendula u-Alanis Zambrana
Ngaba ipod yam inokonakala xa ndifaka i-cydia?
Andikwazi ukufaka i-cydia kwi-iphone 5 uguqulelo 6. 1. 4
Ndifuna nokukhuphela i-cydia ngqo kwiselfowuni, ndingayenza njani !!
Ndiyifaka njani kwi-iPod 4g
Ndiyihlaziya njani i-iphone a1332 kwaye ndiyifaka i-cydea njengoko usitsho
Andikwazi ukukhuphela u-cydia Kien kwi-iPad yam
Kutheni le nto ukuvula iVodafone iPhone kubiza kakhulu?
Ezinye ii-iPhones 5 ziza nebhetri evulekileyo